November 22, 2020 - Padaethar
စက်ဆွဲစရာမလိုဘဲ ဆံပင်ကို ဖြောင့်စင်းသွားစေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း (၄)ခု Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ဓာတုဆေးသုံးပြီး၊ အပူပေးပြီး ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းက ပျိုမေတို့ဆံကေသာကိုခြောက်သွေ့ပျက်စီးစေတဲ့အပြင် ဆံသားကိုပြောင်းသွားစေတာမျိုး၊ ဆံပင်တွေ အရမ်းကျွတ်ပြီး ပါးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်စေတာကြောင့် ခဏခဏဆံပင်ဖြောင့်လို့မကောင်းဘူးနော်။ ဒီတော့ ဓာတုဆေးမသုံး၊ ဖြောင့်စက်မလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်းဆံပင်လေးတွေဖြောင့်စင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) ကြက်ဥအကာနဲ့ဒိန်ချဉ် ကြက်ဥအကာတစ်လုံး၊ ဒိန်ချဉ်နှစ်ဇွန်းတို့ကိုရောမွှေပြီး ဆံပင်အရင်းကနေအဖျားထိလိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်ကြာရင်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ပြန်ဆေးချပြီး ခေါင်းပြန်လျှော်ပေးလိုက်ကာ သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံပေးလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားတဲ့အခါ ဘီးအစိပ်လေးနဲ့ဖြီးပေးလိုက်ရုံနဲ့ သဘာဝအတိုင်းဖြောင့်စင်းတဲ့ဆံကေသာကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ (၂) ငှက်ပျောသီးနဲ့ပျားရည် ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံး၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်းတို့ကို သမအောင်မွှေလိုက်ပြီး ဆံပင်အနှံ့လိမ်းပေးပါ။ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ထားပြီး ရေအေးနဲ့ပဲခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်ပါ။ သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံပြီး ဘီးလေးနဲ့ဖြီးပေးလိုက်ရင် ဆံပင်လေးတွေဖြောင့်စင်းသွားပြီး အစိုဓာတ်လည်းပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်။ (၃) အုန်းဆီနဲ့ပျားရည် အုန်းဆီနှစ်ဇွန်းနဲ့ ပျားရည်နှစ်ဇွန်းဆတူရောပြီး ဆံပင်အရင်းကနေအဖျားထိရွှဲနေအောင်လိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်လောက်ထားပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ပေးပြီး …. သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံပေးလိုက်ပါ။ ဆံပင်သားလေးတွေ … Read more
အရေပြားဆရာဝန်တွေအကြံပေးထားတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက် (၆)ချက် Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် အရေပြားအထူးကုတွေနဲ့ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ တွေ့ဆုံပြီး အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းကို သေသေချာချာမေးကြည့်ဖူးချင်တယ်ဟုတ်။ ဒါဆိုရင်တော့ဒီဆောင်းပါးလေးဟာ အရေပြားဆရာဝန်တွေ အကြံပေးထားတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေဖြစ်လို့ ကွက်တိပဲနော်။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်း လိုက်နာပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာပြီး လှပတဲ့အသားအရေလေးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ကောင်းမွန်စွာဆေးကြောပါ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ပြင်းထန်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းပါတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေကို မသုံးပါနဲ့။ အသားအရေကို အတွင်းပိုင်းအထိ အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးမျိုးကို အသုံးပြုပေးပါ။ (၂) Sunscreen များများလိမ်းပါ Sunscreen လိမ်းတဲ့အခါ နည်းနည်းလေးပဲမလိမ်းပါနဲ့။ ထူထူနဲ့များများလေး လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှအသားအရေရဲ့ အတွင်းပိုင်း ၂လွှာလောက်အထိစိမ့်ဝင်ပြီး နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ပိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) ဗူးအသေးရွေးဝယ်ပါ အလှကုန်တွေ၊ Skincare တွေဝယ်တဲ့အခါ ဗူးကြီးထက် ဗူးသေးတွေကို ဝယ်ပါ။ … Read more
၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း (၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း တစ်ပတ်တာအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ရမဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ ၊ ယတြာများ ဟောပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီအပတ်ထဲမှာ အိုးအိမ် ပြောင်းရတာမျိုး လုပ်ငန်း နေရာပြောင်းရတာမျိုး ကြုံတတ်တယ်။ ဖြတ်လမ်းစီးပွါးရေးများ မလုပ်ပါနဲ့။ ဆုံးရှုံးမှုတွေများတတ်တယ်။ ငွေကြေး ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့ မမြဲပဲ ဖြစ်နေမယ်။ ရေလုပ်ငန်း ရွှေလုပ်ငန်း ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ အရောင်းအဝယ်အေးနေတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ မြေကိစ္စတွေမှာတော့ အောင်မြင်မယ်။ ထင်သလောက်မအောင်မြင်နိုင်တာကတော့ ရွှေလုပ်ငန်းဖြစ်ပါမယ်။ အနှောင့်အယှက် အနည်းငယ်တွေ့ရတတ်တယ်။ လူပျို … Read more
ပေါင်ခြံမည်းခြင်း ၊ ဟိုကြား ဒီကြားမည်းခြင်းတို့ကို အထိရောက်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
လူမြင်မခံဝံ့သောနေရာများ ၊ ပေါင်ခြံ ၊ ချိုင်း ၊ ရင်သားထိပ်သီး ၊ စတဲ့ အရေပြားနေရာတွေဟာ အခြား နေရာတွေထက်စာလျှင် ပိုပြီး ညိုမည်းလေ့ ရှိကြပါတယ် ။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းဟာ အမွှေးရိတ်ခြင်း တစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ထိုအရေပြားနေရာတဝိုက် အောက်ဆီဂျင်မရခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ၊ စိုစွတ်မှုများခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ၊ ချွေးထွက်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ၊ တင်းကျပ်သော အတွင်းခံများကြောင့်လည်းကောင်း ၊ အရေပြားပွတ်တိုက်မှုကြောင့် လည်းကောင်း ၊ အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းကောင်း ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဒီလို ညိုမည်းလေ့ ရှိကြပါတယ် ။ မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဒီလိုညိုမည်းနေခြင်းကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ် ။ ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင် ပြန်လည်ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ၁။သံပုသီး … Read more
ညအိပ်ချိန်မှာ ဘရာဇီယာချွတ်အိပ်သင့်သလား Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် မိန်းကလေးအချို့က ဘရာဇီယာကို အချိန်တိုင်း၊ အချိန်ပြည့် ဝတ်ထားရတာကိုပဲ သက်တောင့်သက်သာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘရာဇီယာက ရင်သားတွဲကျခြင်းနှင့် ရင်သားပုံ မကျခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အမြဲ ဝတ်ထားသင့်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ညအိပ်တဲ့ အခါမှာတော့ မဝတ်သင့်ပါဘူးနော်။ ညအိပ်တဲ့ အခါမှာ ဘရာဇီယာ ဝတ်အိပ်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက် ဘယ်လို ဆိုကျိုးတွေ သက်ရောက်နိုင်လဲ ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့ အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁) ညအိပ်ချိန်မှာ တင်းကြပ်နေတဲ့ ဘရာဇီယာ ဝတ်အိပ်ခြင်းကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပြီး ရင်သား ကြီးထွားမှုကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟော်မုန်းဓာတ် မညီညွတ်ခြင်းကြောင့် စိတ်ခံစားမှု အတက်အကျ မြန်ခြင်း စတဲ့ … Read more
တစ်ရွာလုံးပိုက်ဆံကိုင်ခွင့် မရသည့် ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ
တစ်ရွာလုံးပိုက်ဆံကိုင်ခွင့် မရသည့်တံငါရွာ ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ လူတစ်ဦး၊ မိသားစုတစ်စုတွင်မက တစ်ရွာလုံး ပိုက်ဆံမရှိဘဲ ရပ်တည်နေထိုင်သည့် ရွာတစ်ရွာမှာ တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိနေသည်။တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ယင်းရွာရှိနေသည်။ အမည်က (ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ) ဒုံးကျွန်းအုပ်စုအတွင်း ဒုံးပုလဲအော် ၊ ဒုံးညောင်မှိုင်း ၊ဒုံးဒဟွန်း စသည့်ကျေးရွာအမည်များရှိကြသည်ကို လူအများကသိကြသည်။သို့သော်( ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ) ဟု ရွာလေဆိပ်တွင်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတင်ထားသော်လည်း သူ့ရွာအမည်ကို လူအများသိပ်မကြားဖူးကြ။ သည်ရွာကို ဦးဆွေသန်းဆိုသူက လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ခြေတစ်ရာနီးပါးပင်ရှိလာနေပြီဖြစ်သည်။ ယင်းရွာတွင် လက်ရှိနေထိုင်နေကြသူ တခြားဒေသများမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး အခြားဒေသများမှလာရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး အခြေချနေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။သို့သော် ဦးဆွေသန်းမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ၄င်းအစား သမီးဖြစ်သူက အဖေ၏ လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေသည်။ရွာရှိ ၁၂ နှစ်အရွယ် ယောက်ျားကလေးမှအစ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်သည့် အမျိုးသားအားလုံးမှာ ပင်လယ်ပြင်ထွက်၍ … Read more
သွေတိုးရောဂါ အမြစ်ပြတ် ငါးနုသန်းနဲ့ဒန့်သလွန်ရွက်
သှတေိုးရောဂါအမွဈတယျဆိုတဲ့နညျး သှတေိုးရောဂါအမွဈပွတျငါးနုသနျးနဲ့ဒနျ့သလှနျရှကျ အသကျ၄၀အရှယျ သှေးတိုးရောဂါရှိလာတော့… ငါးနုသနျးနဲ့ဒနျ့သလှနျရှကျ ကို ၁၀ ရကျလောကျဆကျတိုကျ ဟငျးခြိုခကျြစားရာ ယ်ခုအသကျ၇၀ ကြျောသညျ့တိုငျ ရောဂါပွနျမပျေါတော့ပါ။ ငါးနုသနျးနှငျ့ဒနျ့သလှနျရှကျ ဟငျးခြိုခကျြနညျး ငါးကိုစငျအောငျဆေးပွီး ဆားနနှငျးနယျထားပါ။ ရလေိုသလောကျတညျထားပွီး ခငျြး၊ကွကျသှနျဖွူ/နီထညျ့ပွုတျပါ။ ပွုတျရညျဆူလာလြှငျ နယျထားသောငါးထညျ့ပါ။ အပျေါယံအမွုပျမြားခပျထုတျပဈပါ။ ငါးပွုတျရညျ ကလြာလြှငျဒနျ့သလှနျရှကျထညျ့၍ ငရုတျကောငျးမှုနျ့ခပျသောကျပါ။ (အခြိုမှုနျ့နှငျ့ဆီ မထညျ့ရပါ။) ctedit Myanmar Oo MyMc zawgyi သွေတိုးရောဂါအမြစ်တယ်ဆိုတဲ့နည်း သွေတိုးရောဂါ အမြစ်ပြတ် ငါးနုသန်းနဲ့ဒန့်သလွန်ရွက် အသက်၄၀အရွယ် သွေးတိုးရောဂါရှိလာတော့ ငါးနုသန်းနဲ့ဒန့်သလွန်ရွက် ကို ၁၀ ရက်လောက်ဆက်တိုက် ဟင်းချိုချက်စားရာ ယ္ခုအသက်၇၀ ကျော်သည့်တိုင် ရောဂါပြန်မပေါ်တော့ပါ။ ငါးနုသန်းနှင့်ဒန့်သလွန်ရွက် ဟင်းချိုချက်နည်း ငါးကိုစင်အောင်ဆေးပြီး ဆားနနွင်းနယ်ထားပါ။ ရေလိုသလောက်တည်ထားပြီး ချင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ/နီထည့်ပြုတ်ပါ။ ပြုတ်ရည်ဆူလာလျှင် နယ်ထားသောငါးထည့်ပါ။ အပေါ်ယံအမြုပ်များခပ်ထုတ်ပစ်ပါ။ ငါးပြုတ်ရည် … Read more
(၂၂.၁၁.၂၀) မှ (၂၈.၁၁.၂၀) ရကျနအေ့ထိ တဈပတျစာဟောစာတမျး ခုနှဈရကျသားသမီးမြားအတှကျ (၂၂.၁၁.၂၀) မှ (၂၈.၁၁.၂၀) ရကျနအေ့ထိ တဈပတျစာဟောစာတမျး တနင်ျလာ အင်ျဂါ ဗုဒ်ဓဟူး ကွာသပတေး သောကွာ စနေ တနင်ျဂနှေ တဈပတျအတှငျးသငျ့ကံကွမ်မာ ကံ၊ ဉာဏျ၊ ဝီရိယ သုံးပါးလုံးခြိနျဆနိုငျအောငျ တဈပတျစာဟောစာတမျးမြား Credit to Min Thein Kha – မငျးသိင်ျခ (၂၂.၁၁.၂၀) မှ (၂၈.၁၁.၂၀) ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် (၂၂.၁၁.၂၀) မှ (၂၈.၁၁.၂၀) ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း တစ်ပတ်အတွင်းသင့်ကံကြမ္မာ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယ သုံးပါးလုံးချိန်ဆနိုင်အောင် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်းများ Credit to Min Thein Kha – မင်းသိင်္ခ
“လူပျိုဆိုပြီး လိမ်ညာလက်ထပ်ခဲ့သူကို ယုံမိလို့ အကြွေး သိန်း(၃၀) နဲ့အတူ ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်” တင်ခွင့်ပြုပါရှင့် အစကမတင်တော့ဘူးလို့ အရမ်းယုတ်မာလွန်းလို့တင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျေးဇူးပြူပီး ဒီပိုစ့်ကို share လေးလုပ်ပေးကြပါ။ ပုံပါ အမျိုးသားသည် ညီမကို လူပျိုလူလွတ်ဆိုပီး ၂နှစ်ကျော်ပေါင်းသင်းခဲပါတယ် သူအပြင် သူ့ညီအကိုတွေကပါ လူပျိုဖြစ်ကြောင်း ဆိုလို့ ညီမသည် သူ့ကိုယုံကြည်ခဲပါသည်။ သူနဲယူပြီး ၁နှစ်အကြာ ညီမ အမျိုးသား ဝင်းလင်းသန်း သည်အိမ်ထောင်ရှိကြောင့် ညီမ သိရှိခဲရပြီး ဝင်းလင်းသန်းကို မေးမြန်းမြန်းရာ တရားဝင်ကွာရှင်းထားတာ ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည့်အောင်ပြောခဲသဖြင့်သူ့ကိုထပ်လက်ခံခဲပါတယ်။ 12.4.2020 ဝင်းလင်းသန်းသည် တရားဝင်မကွာရှင်းရသေးပဲညီမကို ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြောင်း သေချာသိရလို့ တစ်လင်တစ်မယား ပုဒ်မ(၁၇)နဲ့ ညီမ အမူ့ဖွင့်ခဲပါတယ်။ ညီမ အမျိုးသားသည် အချုပ်ထဲမှာနေခဲရပါတယ် ညီမကို အမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပီး ဟိုမိန့် အမျိုးသမီးနဲ့ … Read more
သင့်ရဲ့လက်မှာ ဘာလမ်းကြောင်းလေးတွေ ပါလဲဆိုတာကို ရှာကြည့်ရအောင်နော်။ ၀၁. ဒီလမ်းကြောင်းလေးကတော့ အသက်လမ်းကြောင်းကနေ ဆက်ပြီးရှည်ထွက်လာတဲ့ လမ်းကြောင်းလေးပါ။ ဒီလမ်းကြောင်းလေးပါရင်တော့ သင်ဟာ ကံအလွန်ကောင်းသောသူဖြစ်ပြီး အခြားသောသူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပြီး အရာရာမှာအောင်မြင်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၀၂. ဒီလမ်းကြောင်းလေးကတော့ အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းသူဖြစ်မှာပါ။ ဆိုလိုတာက သူဌေးသား၊ သူဌေး သမီးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပါလိမ့်မယ်။ ၀၃. ဒီလမ်းကြောင်းလေးပါသူကတော့ စိတ်ကူးကောင်းပြီး တီထွင်ကြံဆတတ်သူဖြစ်ပြီး လူအကဲခတ်တော် သူလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၀၄. ဒီလမ်းကြောင်းလေးပါသူကတော့ ထူးခြားပါတယ်။ လူ၁ထောင်မှာ တစ်ယောက်လောက်သာပါတဲ့ လမ်းကြောင်းလေးပါ။ vထူးခြားသောသူဖြစ်ပြီး အတွေးအခေါ်လည်းကောင်းသောကြောင့် ခေါင်းဆောင် ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၀၅. ဒီလမ်းကြောင်းလေးပါသူကတော့ အကြားအမြင်ရသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အနောက်မှာ တယောက် ယောက်ရှိရင်လည်း ရှိနိုင်တယ်နော်။ ၀၆. ဒီလမ်းကြောင်းလေးက ပေါ်လာရင်တော့ အောင်မြင်ရန် နီးစပ်နေပါပြီ။ ဒီလမ်းကြောင်းလေးက အောင် မြင်တော့မယ်ဆိုရင် … Read more